Rafael Nadal na-eme ememe na Roland Garros - comparatif-audio.net
Rafael Nadal na-eme ememe na Roland Garros
Mbipụta nke 125 nke Roland Garros na France malitere na Rafael Nadal na-aga n’ihu n’okporo ụzọ ya dị egwu maka aha ọzọ na akwụkwọ egwuregwu ahụ, na ụzọ kacha mma iji mee ya karịa ụbọchị ọmụmụ, n’ihi na ụbọchị Tọọzdee ndị Spen na-egwu egwuregwu tennis na-agba afọ 35 ịga nke ọma na mmeri.
A mụrụ Rafa Nadal na June 3, 1986, na Manacor, obere obodo Spanish dị n’akụkụ Oké Osimiri Mediterenian. Obodo a nwere naanị ndị bi na 45,000 ma nwee aka na-ejide obi dị ka ọta, ihe Nadal gosipụtara n’oge ọrụ ya niile.
N’ịsọpụrụ onye mmeri kachasị ukwuu nke Roland-Garros 1⃣3⃣🏆 @ RafaelNadal weputara Thursday a akpụrụ akpụ ya na ama egwuregwu Roland-Garros 🏟️ # RolandGarros
– Roland-Garros (@rolandgarros) Ka 27, 2021
Ya akụkọ ihe mere eme dị ka ndị ọkachamara malitere na 2002, mgbe ọ dị nanị afọ 15 ka o meriri Paraguayan Ramón Delgado 6-4 na 6-4 na asọmpi International usoro na Mallorca. Nke a mere ya nwatakịrị mmeri nke egwuregwu egwuregwu nke Association of Professional Tennis Player (ATP).
Na-ebi ndụ egwuregwu nke egwuregwu anyị
Afọ atọ mgbe nke ahụ gasịrị Rafa rụrụ ụka nke mbụ ya Roland Garros, bụ nke ọ meriri n’ọgụ ahụ mgbe ọ merisịrị David Ferrer na nkeji iri na ise, Roger Federer na semifinal na Argentine Mariano Puerta na nnukwu ikpeazụ na anọ anọ nso.
Nnukwu ihe nketa
Site n’ụdị egwuregwu ike, na-akwụsịghị ịlụ ọgụ na obi nke gosipụtara ihe niile, Nadal nọ na-aghọrọ mmeri, na-enweta mmeri Australian, 13 Roland Garros, Wimbledons abụọ na US Mepee; Tụkwasị na nke a bụ nrite ọla edo na Egwuregwu Olympic nke 2008. Ọ nọrọ izu 209 na elu nke tennis ụwa na obi abụọ adịghị ya na ọ ga-anọ na mkparịta ụka akụkọ ihe mere eme maka oge kachasị mma.
Soro ọrụ niile nke Rafael Nadal na mbipụta a nke Roland Garros na Strendus. Anyị nwere na Egwuregwu Egwuregwu anyị niile egwuregwu nke ngalaba nwoke na nwanyị maka gị iji soro ndị egwuregwu kachasị amasị gị. Were ịhụnanya nke egwuregwu ọcha na ọkwa ọzọ wee merie egwuregwu ahụ na Strendus.